आज थपिए यति धेरै कोरोना संक्रमित, कुन उमेरका कति संक्रमित थपिए ? – Ap Nepal
आज थपिए यति धेरै कोरोना संक्रमित, कुन उमेरका कति संक्रमित थपिए ?
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोभिड-१९ का ७ हजार ४४८ जना संक्रमित थपिएका छन् । जसमध्ये ९ वर्षसम्मका बालबालिका १५६ जना र १० देखि १९ वर्षका ४३९ जना रहेका छन् ।
त्यस्तै, २० देखि २९ सम्मका १ हजार ६८८ जना रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमित हुनेहरुमा सबैभन्दा धेरै ३० देखि ३९ वर्षका नागरिक १ हजार ८७१ जना छन् । ४० देखि ४९ वर्षका १ हजार ३६९, ५० देखि ५९ वर्षका ९८८ जना, ६० देखि ६९ का ५२२ जना छन् ।
त्यस्तै, ७० देखि ७९ का २२० जना, ८० देखि ८९ का ७९ जना, ९० देखि १०० वर्ष उमेरका ९ जना र उमेर नखुलेका ४७ जना छन् । अहिले देशभर ५७८ जना आईसीयूमा र १४२ जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो पनि… आज नेपालमा थपिए अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित ,३७ जनाले मृत्यु … नेपालमा आज ७४४८ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ३७ जनाको ज्यान गएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १६६५८ जनाको पीसीआर परिक्षण भएको छ भने ५१८ जनाको एन्टीजेन परिक्षण भएको छ ।
Prevआज नेपालमा थपिए अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित ,३७ जनाले मृत्यु
Nextनिषेधाज्ञामा अत्यावश्यक काम परेर कतै जान पर्यो भने यसरी पाउने पास ? पूरा जानकारी लिनुहोस्
मोटरसाइकलमा कलंकी जाने भनेर लि’फ्ट मागेकी युवतीले जब चोभार पुर्‍या,इन् र त्यसपछि… (38462)